Usebenzisa Imidiya Esebenzisana Ukukhuthaza Amaphromoshini wakho we-B2C | Martech Zone
Akunandaba ukuthi ukuyiphi imboni, uma ibhizinisi lakho lisemkhakheni we-B2C, amathuba mahle kakhulu ukuthi ubhekene nokuncintisana okunzima - ikakhulukazi uma uyisitolo sezitini nodaka. Ngemuva kwakho konke, uyazi ukuthi abathengi bathenga i-inthanethi malini futhi kaningi kangakanani. Abantu basaya ezitolo zezitini nosimende; kepha ukuthengwa okuku-inthanethi kwenze inani labathengi abasesitolo lehle. Enye yezindlela amabhizinisi ukuzama ukulungisa lokhu ngokwenza ukukhushulwa - ngamakhuphoni, uhlu olusha lwezimpahla, izaphulelo ezinkulu, njll. Futhi, labo bancintisani abafanayo esixoxe ngabo benza ukukhushulwa okuhehayo nje… uma kungenjalo kuheha kakhulu kunokwakho.
Kulezi zinsuku, ukukhushulwa okuqhutshwa amabhizinisi akwanele ukushayela ithrafikhi yasesitolo noma ukuthenga kwe-inthanethi. Izimbangi zakho kungenzeka zisebenzisa amanye amaphromoshini afanayo nawe - kwesinye isikhathi ngasikhathi sinye. Lokho kusho ukuthi abathengi abaningi bazosebenzisa "ukusebenziseka kalula" njengesinqumo sokunquma ukuthi bayahamba noma cha nesikhungo sakho: sithembekile ngokususelwa kuzibuyekezo eziku-inthanethi, ukusondelana nendlu yakho (uma isitolo sodaka), izincomo ezivela kumngane ( ukugwema ucwaningo) kanye nesipiliyoni (nesikhungo esishiwo) yizona zinto ezinquma kakhulu. Ngamafuphi, ukukhushulwa kwakho kudinga ukugqama.
Ukuze ukukhushulwa komkhiqizo wakho kugqame, ngokusobala kakhulu udinga ukwenza okuhlukile. Enye yezindlela ezinhle zokwenza lokhu ukuhlanganisa okwenziwayo kokusebenzisana kuwebhusayithi yomkhiqizo wakho. Okuhlangenwe nakho okusebenzisanayo kubalulekile ngoba kuvumela imikhiqizo ithuba lokunikeza ukuholwa ngezinqumo ezibalulekile, noma zokuthenga ze-BIG. Ibuye inikeze ama-brand ithuba lokujabulisa abathengi bawo. Nazi ezinye izinketho zokuhlangenwe nakho okuhlangene ongakuhlanganisa kuwebhusayithi yakho ukuze wandise ukuzibandakanya, futhi ekugcineni, ukhulise ukuguqulwa.
Emabhizinisini athengisa imikhiqizo nezinsiza “eziwubukhazikhazi” okuvame ukudinga ukucabanga okuningi (izimoto, ifenisha, imali ebanjwayo, njll.), Ama-calculator ayisiqeshana esihle sokuqukethwe esingaqondisa abathengi bakho ezinqumweni ezifanele zokuthenga. Izikhathi eziningi, ngisho abathengi abanolwazi kakhulu futhi abazinzile badinga ukuthatha isinyathelo emuva ukunquma ukuthi yini abangakwazi futhi abangakwazi ukuyikhokhela. Amanye ama-calculator ajwayelekile esiwabonayo yile: Ama-calculator wokukhokha wenyanga, ama-calculator enzalo kanye nama-calculator akhokhelwayo
Vele, imali akusona ukuphela kwesizathu sokudinga umshini wokubala. Abathengi bakho bangadinga ukubala ukuthi banesikhala esingakanani sosofa abasha. Noma, abathengi bakho bangafuna ukubala inkomba yomzimba wabo, noma isisindo sabo esifanele, ukuze babone ukuthi yiluphi uhlelo lokuzivocavoca olubafanele. Iphuzu lapha ukuthi izibali zenza izinqumo zibe lula, ngoba zihlinzeka ngamanani ezinombolo kokuguquguqukayo okuthile. Uma ingcono inombolo (noma ngabe iphezulu noma iphansi), isikhathi esingcono lapho umthengi ethola impendulo yakhe - futhi lokho kuvame ukuholela ezinhlosweni ezengeziwe zokuthenga.
Izibali zingaba yinzuzo enkulu kubathengi abafuna ukubamba iqhaza kuphromoshini yakho yamanje. Noma izibali zingasetshenziswa nganoma yisiphi isikhathi, ikhono lokuthola izimpendulo zemibuzo ebalulekile liyabadudulela phansi kulayini wokuthenga. Lapho bazi ngokwengeziwe ngesimo sabo esithile, bathambekele kakhulu ekuthengeni. Futhi uma kunokwenyusa okuqhubekayo (ake sithi, “Akukho zinkokhelo Kuze kube ngu-2017”), umthengi uzama ukubala ukuthi yini angakwazi ukuyikhokhela ngokuzayo ngaphambi kokuzibophezela okunjalo. Lapho sebenempendulo yabo, bazobe sebethenga.
Kwesinye isikhathi ukunganqumi komthengi akuhlobene nezezezimali (noma ukubalwa okuthile); kodwa kunalokho, ukukhetha okumsulwa. Lapho abathengi bethulwa ngezinketho eziningi ezinhle (okuvame kakhulu ngesikhathi sephromoshini), kwesinye isikhathi bavinjelwa amandla okunquma. Kuzwakala kungenangqondo, kodwa kuyiqiniso ngokuphelele. Abanye abathengi bazomane badele uma bengakwazi ukufinyelela esinqumweni sokuthenga - ikakhulukazi uma kungukuthenga okukhulu. Uma umthengi engazimiseli ngokuphelele kokuthile, umcabango wakhe uthi “Awu, akumele kube kuhle kangako ngaleso sikhathi. Kungani ngizosebenzisa isizumbulu semali uma ngisocingweni? ” bese beqhubeka.
Okuhlangenwe nakho kokuhlola kungenye indlela enhle yokwenza abathengi bakho baqhubekele phambili phansi ngofanele wokuthenga - ikakhulukazi uma kukhulunywa ngamaphromoshini akho aku-inthanethi. Ngoba ukukhushulwa ngokuvamile kuqukethe ukukhetha okuthile kwemikhiqizo, amasevisi noma okunikezwayo, ukuhlolwa kungaqondisa abathengi kwenye yezinketho ezitholakalayo.
Masisebenzise amaqembu ezenzakalelayo njengesibonelo. Njengoba kungenzeka uyazi, amaqembu ezimoto aqukethe abathengisi abaningi esifundeni esithile; futhi indawo ngayinye edayisa ngokujwayelekile ithengisa uhlobo olulodwa lwemoto (iToyota, iKia, iHyundai, njll.). Ake sithi umthengi uzwile izinto ezinhle ngaleli qembu elizenzakalelayo; nabo bonke abathengisa (eqenjini lezimoto) babamba iqhaza ekunyusweni kwe- "Akukho zinkokhelo kuze kufike u-2017". Konke kuzwakala kahle futhi kukuhle… uze uthole ukuthi umthengi akaqiniseki nhlobo ukuthi iyiphi imoto / imodeli afuna ukuhamba nayo. Ukugcina lowo mthengi angayi kwenye indawo yokuthengisa, iqembu lezimoto lingabeka ukuhlolwa kuwebhusayithi yalo ukuze libaqondise esinqumweni sokuthenga. Uhlobo oluhle lokuhlola kungaba yilolo olunikeza “ukwakheka / imodeli” umthengi ngokuya ngezimpendulo umthengi azinikezayo - “kufanele uhambe ngemoto enjani?” ukuhlolwa.
Enye indlela enhle yokusebenzisa umuzwa osebenzisanayo ngamaphromoshini akho UKWENZA isipiliyoni sakho sokusebenzisana sibe yiphromoshini. Akunandaba ukuthi yikuphi okunye ukuthengisa okwenzayo, ungagqugquzela abathengi ukuthi bavakashele isitolo sakho (noma iwebhusayithi) ngomdlalo we-Instant Win - unikeza ithuba lokuwina umklomelo we-BIG, futhi unikeze izinhlinzeko noma imiklomelo yokududuza abantu abangawenzi uwine i-jackpot. Lokhu okuhlangenwe nakho kungaqukatha: imishini ye-digital slot, amasondo we-spin-to-win (njenge Wheel of Fortune) noma okunye okuhlangenwe nakho okungahleliwe okukhetha umklomelo owodwa, omkhulu. Eminye imiklomelo noma ukunikezwa (okungashiwo ngaphambi kokubamba iqhaza) kungaba yinto ebalulekile njengokubonisana kwamahhala, akukho zinkokhelo zanyanga zonke, imali ephansi, noma u- $ 100 ekuthengeni i- $ 800 noma ngaphezulu. Ingxenye ehamba phambili ukuthi lezi zinhlobo zokuhlangenwe nakho zibandakanya kakhulu, ngoba zikhulisa isasasa futhi akuvamile ukuthi ziholele kumakhasimende acasukile noma aphazamisekile. Iqiniso lokuthi bayazijabulisa futhi "bayawina" okuthile likwenza lolu hlobo oluhle kakhulu lokuhlangenwe nakho kokusebenzisana - kuya ngomkhakha, kunjalo.
Uhlobo lokugcina lokuhlangenwe nakho engizokuya kulo “yimibuzo.” Yize imibuzo enganikeli ngokuthize ngenani elibambekayo (ngenani elibonakalayo, ngisho impendulo, isipho noma umklomelo), bangashiya abathengi benomuzwa wokwaneliseka. Ngokuvamile, lapho abathengi bezizwa bejabule noma beziqhenya ngabo, bazotshela abangane babo. Endabeni yemibuzo (ngesimo sokusebenzisana), abathengi bazothambekela ekuhlanganyeleni imiphumela yabo ezinkundleni zokuxhumana - futhi babaphonsele inselelo. Futhi, ngaphandle kokungabikho okunikezwayo "okubambekayo", lezi zinhlobo zokuhlangenwe nakho ziyamangalisa ukufaka uphawu. Lapho imibuzo iphenya ilukuluku lomthengi, kulapho lo mkhiqizo uba khona - futhi baba nelukuluku ngokwengeziwe lolo hlobo. Ngokuya ngamaphromoshini, imibuzo oyibuzayo kuleyo mibuzo ingabonisa ingqikithi yokuphakanyiswa okuku-inthanethi - okuqhubeka kuphakamise ilukuluku lomthengi.
Yikuphi kulezi zinhlobo zesipiliyoni okungazuzisa kakhulu ebhizinisini lakho? Sitshele kumazwana angezansi!
Tags: okuhlangenwe nakho kokukhangisaUkusebenzisana komthengiUkukhangisa Okuqukethweokuqukethwe okusebenzisanayoimidiya exhumanayoukukhushulwa online